Haa Cali Mahdi waa uu ila so xiriiray, waxaana ka wada...
Wararkii: Jun 28, 2007
Prof Ibraahim Xasan Caddow �Haa Cali Mahdi waa uu ila so xiriiray, waxaana ka wada...
Max�ed Dheere �kuwa qaraxyada ka wada Muqdisho ma doonayaan in��
Qarax ka dhacay Magaalada Baydhabo oo ay dad ku dhinteen
Barre Hiiraale oo ku dhaawacmay qarax la kacay Baabuurkiisa
Qarax shalay ka dhacay agagaarka Baar-Ubaxa gaar ahaan dhinaca suuqa Bakaaraha
Cali Mahdi oo shaaciyey inuu xiriir la sameeyey Maxaakiimta Islaamiga ah
Cadde Muuse oo xilka ka xayuubiyey Taliyihii Saldhiga iyo Taliyihii Qaybta G.Nugaal.
Salaad Cali Jeelle oo tegay Garowe.
Soo Dhaweyntii R/Wasaare Geedi ee DC...
"Xalka Soomaaliya waxa uu ku xiran yahay iyadoo ciidamada shisheeye ka baxaan Soomaaliya" Prof. Caddow
Xoghayaha arrimahada dibadda ee Maxaakiimta Islaamiga ah Prof, Ibraahim Xasan Caddow ayaa daboolka ka qaaday in Cali Mahdi Max;�ed uu xiriir la soo sameeyey isla markaana ku wargeliyey inay ka soo qaybgalaan shirka dib u heshiisiinta.
Prof. Ibraahim ayaa sheegay in maxaakiimta Ilsaamiga ah diyaar u yihiin in ay ka qaybgalaan meel kasta oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, waxa uuna sheegay in arrintaani uu kala hadli doono mas�uuliyiinta ugu sareysa Maxaakiimta Ilsaamiga ah ee iyagu ku sugan Magaalada Asmara.. �Dalka waxa uu ku jiraa Gumeysi, xalka Soomaaliya waxa uu ku xiran yahay iyadoo ciidamada shisheeye ka baxaan Soomaaliya� ayuu yiri Ibraahim Xasan Caddow oo sheegay in inta ay ku sugan ciidamada Shisheeye dalka aysan suuragal aheyn in la qabto shir dib u heshiisiin ah. Prof Ibraahim oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in Maxaakiimta Islaamigu yihiin kuwo doonaya nabada soomaaliya. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in gudiga dib u heshiisiinta looga baahan yahay ergo u diraan xubanaha ugu sareeya Maxaakiimta ee Asmara ku sugan si ay u soo ogaadaan qaabka ugu haboon ee shir dib u heshiisiin loo qaban karo.
Wararka hoose ka akhri "Cali Mahdi oo shaaciyey inuu xiriir la sameeyey Maxaakiimta Islaamiga ah "
Max�ed Cumar Xabeeb (Max�ed Dheere) oo ah duqa Magaalada Muqdisho ayaa dib ug u soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu booqasho ku gaaray Magaalada Nayroobi. Max�ed Dheere mar wax laga weydiiyey sida uu u arko qaraxyada ka socda magaalada Muqdisho waxa uu yiri �waxaa wada kooxo xiriir la leh dad shisheeye ah oo aan dooneyn in ay da lka nabadi ka dhalato� wuxuu sii raaciyey �Fiiriya waxay qaraxiyeen Haween waday hawlo la xiriiray bilicda iyo nadaafadda Magaalada Muqdisho, kuwaas miyaa la dhihi karaa Diin ayay u dagaalamayaan�, waxa uuna sidoo kale sii daba dhigay �Haweenkaasi Taariikhda ayaa xusi doonta, dowladda dhexena waxaan kala hadli doonaa sidii carruurtooda loo daryeeli lahaa.
Max�ed Dheere waxa uu sheegay in aysan marnaba maamulkiisu u hakan doonin qaraxydaasi balse ay sii wadi doonaan hawlahooda ku aadan bilicda iyo nabadgelyada Magaalada Muqdisho.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo waxay sheegayaan in xalay fiidnimadii uu qarax ka dhacay Magaaladaasi gaar ahaan halkii uu horey ugu yiilay Hotel Bakiin, waxaana qaraxaasi la xaqiijiyey inay ku dhinteen labo ruux oo halkaa ka ag dhawaa. Warar kala duwan ayaana ka soo baxay qaraxaas oo sheegay in qaraxasai uu ahaa bam gacmeed la soo tuuray iyo in uu ahaa Miino meesha la dhigay. Markiiba waxaa soo gaaray goobti uu qaruxu ka dhacay ciidamada Booliiska oo halkaasi baaritaan ka bilaabay. Dhawaan ayay ahayd markii qarax lala beegsaday Bankiga dhexe ee magaalada Baydhabo halkaas oo ay ku dhinteen labo askri oo ka tirsanaa ciidamadii halkaasi illaalada ka ahaa, sidoo kale waxaa ka horeeyey bam lagu tuuray shaneemo ku taalay Magaalada Baydhabo oo ay ku dhinteen afar ruux, isla markaana ay dhaawacyo ka soo gaareen dad rayid ah.
Wararka naga soo gaaraya Degmada Baardheere waxay sheegayaan in Xildhibaan Barre Aadan Shire (Hiiraale) oo dhawaan laga qaaday xilkii wasiirka Gaashaandhiga Dowladda Federaalka ayaa shalay ku dhaawacmay qarax miino halka meel u dhexeysa Muuri iyo Baardheere oo isku jira ilaa iyo 10-kiilo Mitir.
Qaraxaan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay dhaawacyo ka soo gaareen dhowr sarkaal oo la socday Xildhibaan Barre Hiiraale oo haatna lagu daweynayo xarun caafimaad oo ku taala degmada Baardheere.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dhaawaca gaaray Barre Hiiraale qaar waxay sheegayaan in uu yahay mid fudud, halka kuwo kalana ay sheegayaan in uu yahay mid culus, waxayna wararka qaar sheegayaan in saacadaha soo socda Xildhibaanka laga yaabo in dhaawiciisa loo qaado Magaalada Nayroobi ee dalk Kenya.
Baryahanba degmada Baardheere waxaa ka jiray qaraxyo, waxaana laba qarax lala beegsaday goob lagu daawanayey Aflaanta oo ku taala degmada Baardheere kuwaas oo ay ku dhintee dhowr qofood.
Ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay toban kalana way ku dhaawacantay kadib markii uu qarax ka dhacay agagaarka Baar-Ubax gaar ahaan dhinaca bakaaraha waxaana qaraxaasi lala damacsanaa gaari ay wateen ciidamo Booliis ah.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la sheegay in aya ahaayeen dad rayid ah oo ka ag dhawaan goobta uu qaraxu ka dhcay.
Waqtiyadan dambe waxay Magaalada Muqdisho wehel u noqotay qaraxyada iyo dilalka loo gaysayo xubnaha Dowaldda, waxaana maalintii doraad ahayd uu qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay ilaa iyo shan Haween ah oo ka shaqeynayey hawl nadaafadeed.
Guddoomiyaha Guddiga dib u heshiisiinta Qaranka Soomaaliyeed Mudane Cali Mahdi Max�ed ayaa waxa uu shaaciyey in uu xiriir la sameeyey mas�uuliyiinta ugu sareysa Maxaakiimta Islaamiga ah oo uu ugu horeeyo xoghayaha arrimaha Dibadda Maxaakiimta Islaamiga ah Prof. Ibraahim Xasan Caddow oo ku sug an Magaalada Doxa ee dalka Qadar.
Cali Mahdi waxa uu sheegay inuu ka dalbaday Prof. Ibraahim in Maxaakiimta Islaamiga ah ka soo qaybgalaan shirka dib u heshiisiinta Soomaliyeed oo la filayo in la qabto 15-ka bisha foodda nagu soo hayso.
Cali Mahdi waxa uu sheegay in Guddiga dib u heshiisiinta ay dadaal u gali doonaan sidii ay shirka dib u heshiisinta uga qaybgali lahaayeen dhamaan kooxaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku sugan yihiin ha noqdaan kuwa mucaaradka ku ah Dowladda Federaalka iyo kuwo kalaba.
Cali Mahdi waxa uu sheegay in qof kasta ay diyaar ula yihiin uu ka soo qaybgalo shirkaasi haddii uusan ku shaqeyneen qoriga.
Cali Mahdi waxaa kale oo uu sheegay in dhaqaalihii lagu bixin lahaa shirkaasi uu caalamku u diyaariyey, isla markaana la dhameystiray goobtii lagu qaban lahaa shirkaasi oo ah xaruntii hore ee Gaadiidka Booliiska Soomaaliyeed.
Cali Mahdi waxa uu sheegay ergooyin u kala diri doonaan qaar ka mid ah Gobalada Dalka oo aysan weli ergooyin u dirin, si ay ugala so hadlayaan ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta iyo sidii ay ergooyin ugu soo diran lahaayeen shirka dib u heshiisiinta.
Garowe: Wafdi uu hogaaminayo wasiir ku xigeenka Gaashaandhiga Dawlada FKMG oo Arbacadii ka soo dagay Garowe.
Wafdi uu hogaaminayo wasiir ku xigeenka gaashaandhiga DKGFS Salaad Cali Jeele ayaa Arbacadii June 27 ka soo dagay gagida diyaaradaha ee Conoco oo magaalada garowe dhanka bari ka xigta una jirta 35 KM.
Wafdigan ayaa waxay dubra kulamo kafool kafool ah la qaateen madaxda dawlad GPL oo uu hor kacayo madaxwaynaha Puntland Gen: Cade Muuse.
Si kastaba U jeedada wafdigan ayaan ilaa iyo hada la shaacin waxaana la filayaa inay puntland ku sugnaan doonaan mudo 7casho ah.
Caawa ayaa waxaa la rajaynayaa in ay faah faahin dheeraad ah ay ka siiyaan madaxda dawlada GPl ujeeda safarkooda.
Wareegto uu soo saaray Gen. cadde Muuse, M/weynaha DGPL ayaa xilka lagaga qaaday Taliyihii Booliska ee Qaybta G/Nugaal wuxuuna u magacaabay taliye cusub oo la yiraahdo. Cabdidhagaf Jaamac Saxar oo ahaa Sarkaalka Ilaalinta Dakhliga Garoonka Conoco(Land Fee). sidoo kalena wuxuu shaqada ka eryey Cabdi Gaani Axmed oo ahaa taliyaha Saldhiga Garoowe wuxuuna u magacaabay, Aadan Faarax Bulay, halka uu u magacaabay taliyahan Saldhiga ciidanka Birmadka ee loo yaqaan S.Bari ee Garoowe, Xaashi Hambo Dawaco, iyadoo uu booskii Cabdidhagaf oo laga dhigay Taliyaha Qaybtana loo magacaabay Laandhuu.
Isku soo wada duub oo arintaan ayaa waxay salka ku haysaa Cadde Muuse oo diyaarsanaya amaba kasbanaya Ciidamada .
Waxaa sidoo kale la filayaa in uu M./weynuhu xilka ka xayuubiyo saraakiil badan oo kale, sida kuwa Boliiska iyo Milateriga amaba sida Puntland looga Yaqaan Daraawishtam kuna bedelo kuwo awaamirta qaadanaya waa sida ay dadku isla dhexmarayaane.
Dhinaca maamulka Puntland ayaa iminka waxaa ka dhexmuuqda dhalinyarada oo uu M/weynaha Puntland xilal uga dhiibay waana markii ugu horeysay ee lagu dhex arko Puntland, dhalinyaro, sida wasiiro iyo madax ciidan, taasna waxay niyad-wanaag u tahay dhalinta balse dadka ruug-cadaaga ah ayaa u fasirtay arin ah nin aad ushaada ka qaadan kartid baa loo dhiibtaa oo macnaheedu yahay (Dhalin-yaradu waa kuwa awaamiirta madaxda dowladda siday tahay u fulinaya, loona yeerinayo wax kasta, maadaama aysan khimrad u lahayn.
Dhamaan ardayda dhigata Jaamacada Forte Hare University (Online-ka) taas oo la mataansan Jaamacada Puntland State University-Garoowe oo ay isku xiran yihiin Jaamacadaha dibbada waxay u tacsiyeynayaan Caduur Aadan Caduur :
1. Xildhibaan Axmed Barre Siciid Muuse
2. Maxamuud Cumar Bille
3. Faadumo Maxamuud Maxamed
4. Axmed Maxamed Cilmi
5. Candinaasir Maxamed Yusuuf
6. Fartuun Maxamuud Maxamed
7. Faarax Cismaan Muuse
9. Siciid Ceerigaabo
10. Eng. Siciid
Waxay dhamaan ardaydaas u tacsiyeynayaan ardayga la yiraahdo Caduur Aadan Caduur oo aabihiid Aadan Caduur ku geeriyooday magaalada Boosaaso ee Xarunta G.Bari 27/06/2007 geeridaas oo ku soo beegmatay wakhti ay ardaydu u fadhiyaan imtixaankii kama damaysta ahaa ee jaamacada dibbada(Final Exam) ayey ardaydu mar kale uga tacsiyeynayaan Caduur, waxayna leeyihiin janadii ALlaha ka waraabiyo marxuumka isagana samir iyo iimaan ha ka siiyo.
Tacsi taas la mid ah waxaa diraya dhamaan shaqaalaha Wasaarada Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah ee DGPL iyo Ardayda Jaamacada Puntland State University-Garoowe
Wefti uu hogaaminayo Wasiir ku xigeenka Gaashaandhiga ee DFKMS ayaa so gaaray Caasuumada DGPL ee Garowe.
Wafdigan waxay isugu jiraan xubno ka kala socda hay'adaha DFKMS , waxayna u yimaadeen Puntland arimo la xiriira iskaashiga DGPL iyo DFKMS ee ku aadan dhinaca Amniga, weftigaan ay kulan albaabadu u xiran yihiin la yeesheen Gen. Cadde Muuse iyo Ku-xigeennkiisa Afqurac iyo wasiiro ka tirsan golihiisa xukuumada, umana aysan suurta gelin saxaafadu in ay la kulanto .
Weftigaan ayaa waxaa hogaaminaya Salaad Cali Jeelle oo ah Wasiir ku xigeenka Gaashaandiga ee DFKMS, waana markii ugu horaysay ee uu yimaado Garoowe.
Wafdigan oo ka kooban 19 xubnood ayaa waxaa ka mid wasiir ku xigeeno, xubno baarlamaan iyo saraakiisha ciidamada xooga dalka Somaaliyeed, iyo xubno ka socda wasaarada Amniga Qaranka, waxaana ku soo dhaweeyey Garoonka Conoco ee Garoowe, wasiiro ka tirsan DGPL.
dhowr maalmood ayaa ka so wareegay markii uu ka tegay Puntland, Taliyaha Ciidanka Boliiska DFKMS, Cabdi Xasan Cawaale(Qaydiid)+ arintaan ayaa mujinaysa, sida ay Puntland ugu tahay kayd DFKMS gaar ahaan dhinaca cidamada.
Soo Dhaweyntii R/Wasaare Geedi ee DC
Xaflad si heersare ah loo soo agaasimey ayaa waxa ay ka dhacdey Gobolka Washington DC agagaarkiisa, xafladaas ayaa loogu talagaley soo dhaweyn lagu soo dhaweynayey Reysal Wasaaraha wadanka Soomaaliya Professor Ali Maxamed Geedi.
Xafladaas ayaa waxa lagu qabtey hotelka weyn ee Sheraton Hotel, waxana ka soo qayb galay in ku dhow kun qofood, iyagoo isugu jirey madax la socotey waftiga R/wasaaraha, madaxdii hore ee dowladii Siyaad Bare, hooyooyin, ardey, shaqaale, wariyayaal, gancsadayaal, fanaaniin, professors, iyo mas�uuliyiin ka socotey mareykanka. Inta badan dadkii ka soo qayb galay xafladan ayaa ka kala yimid yurub iyo gobolada mareykanka.
Furitaanka xaflada ayaa lagu furey heestii calanka Soomaaliya, iyadoo dhamaan dadka wajiyadooda ka muuqdeen hididiilo dowladnimo iyo farxad. Heestii ka bacdi ayaa waxa shirka lagu soo dhaweeyey dadkii loogu talagalay in ay ka hadlaan xaflada oo isugu jirey madax dhaqameedyo, madaxdii hore ee dowladii siyaad bare, professors, Abwano (buraanbur), Aqoonyahano, hooyooyin, afayeeno urur, iyo taageerayaasha dowlada u fadhiya gobolada Mareykanka iyo Canada.
Gebegabadii xaflada ayaa waxa hadal kooban ka jeediyey R/wasaaraha Soomaaliya Proffesor Ali Maxamed Geedi, isagoo qudbadiisa ku taabtey meelo badan. Xafladan oo aheyd xafladii ugu dheereyd ee ka dhacada Washington DC agagaarkeeda, waxa xaflada la bilaabey 8:00 PM habeenimo waxana ay dhamaatey 1:30 AM habeenimo.
Sawiro ka eeg halkan...